साइबर चौतारी: गुगल दाईको छलाङ्ग (Google Wave)
गुगल दाईले छलाङ्ग मारेको हेर्न मैले के मात्र गरीन । गुगलदाई लाई गुहारे ट्वीटरमा भिख मागे आफ्ना चिने जानेका र यसले चाँही गुगल वेभ चलाउछ होला भन्ने लागेका जती सवैलाई मेल गरे कसैले लछार पाटो लगाएनन । " खाने वालो का नाम दाने दाने पे लिखा होता है " भन्छन नि आज गुगल दाईले आफै निमन्त्रणा पत्र पठाए मलाई ।
अहिले म दङ्ग छु तर यसलाई चलाउन र छलाङ्ग मार्न सिक्नु छ । अनि अर्को कुरा म सँग चौध वटा ईन्भिटेसन वाँकी छ । म थुपारेर राख्ने मुडमा छैन तपाई पनि चलाउने मुडमा हुनु हुन्छ भने भन्नु होला पहिले अनुरोध गर्ने चौध जनालाई म निरास पार्दिन ।
अपडेट गुगल दाईको कुरा बुझ्नै गार्हो मेरो ईन्भिटेशन सकिन लागी सक्यो उता ईन्भाईटीहरु मैले ईन्भिटेसन पाएकै भन्दै हुनु हुन्छ । सायद गुगलले अलि समय लिन्छ क्यार (गुगल दाई त्यसै भन्दैछन ।) तर मैले पठाएको ईन्भिटेशन अवश्य पनि तपाँईको हात लाग्छ । ईन्बक्स र स्पाम फोल्डर चेक गर्दै गर्नु होला ।
Anonymous Saturday, November 28, 2009 at 8:02:00 PM GMT+5:45
सर, सात जाना मध्य त पर्छु कि म पनि ????????
[email protected] हो मेरो Mail Id,
Prabesh Saturday, November 28, 2009 at 8:17:00 PM GMT+5:45
मलाई पनि त्यस्तै भा'को थियो । तर दिलिप दाइ(www.dacharya.blogspot.com)ले मलाई ईन्भाईट गर्नुभयो । रमाईलो हुँदैछ चलाउन.....
w38g0ru Saturday, November 28, 2009 at 10:16:00 PM GMT+5:45
उमेश जी पाउनु भयो होला मेरो निम्तो ।
अव म १५ जनालाई निम्तो दिन सक्ने भा छु ! कसैलाई चाहिए भन्नु होला । म ,बाढ्यो भने बढ्छ , भन्ने कुरामा विस्वास गर्छु :-)
Job Provider Sunday, November 29, 2009 at 10:42:00 AM GMT+5:45
ए त्यसो भए मलाई पनि निमन्त्रणा दिनुहोला नि ।
Ram Sampang Sunday, November 29, 2009 at 2:34:00 PM GMT+5:45
I am also waiting you invitation Anish jee.
Invite me in: [email protected]
Anonymous Monday, November 30, 2009 at 4:53:00 AM GMT+5:45
लौ न म नि ट्राई मारौं ...
dev neupane Monday, November 30, 2009 at 2:26:00 PM GMT+5:45
la ma pani try garauna ta.
w38g0ru Wednesday, December 2, 2009 at 9:51:00 AM GMT+5:45
मैले त सबैलाई ईन्भाईट गरी सके कसैले नपाउनु भा भए जानकारी पाँउ
Anonymous Wednesday, December 23, 2009 at 10:08:00 PM GMT+5:45
सर निम्तो पाइयो अनि यसको इमेल अाइडी पनि तयार गरीयो अब यो चलाउन को लागि कोहि पनि अनलाइनमा भेटीनु हुन्न र पो मुस्किल पर्यो, हि हि हि